यो साता लाभ लिने ४ राशी, कसरी हुन्छ लाभ ? – " सुलभ खबर "
यो साता केहि राशीका लागी विशेष महत्वपुर्ण रहेको छ । महत्वपुर्ण यस अर्थमा रहने छ कि ती राशीका ब्यक्तिलाई यो साता धन लाभ सहित धेरै प्रकारका सफलता प्राप्त हुने योग छ ।
ज्योतिषहरुका अनुसार यस साता अर्थात आउँदो बुधबारसम्म ४ राशीका लागी सबै समस्या समाधान भई धन लाभको योग बन्नेछ । कुन कुन राशीका ब्यक्तिका लागी महत्वपुर्ण छ त यो साता ?
साख सम्मान र सृजनशिलताका लागी यो साता निकै श्रेष्ठकर र फलकारक छ । कुनै पनि कार्य, व्यापारमा प्रभावशील भएर अघि बढ्नेछ छ । अरुको भावनाको सम्मान गर्ने र कुल कुटुम्बसंग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार भएर जानेछ । खर्चालु ब्यक्तिका लागी समेत यो साता बजेट नियन्त्रित रहनेछ ।
२ कन्या राशी
यस राशि कन्या राशीका ब्यक्तिका लागी भाग्यबल बढेर आउने भएकाले निसंकोच कुनै पनि कार्य अघि बढ्दा सफलता मिल्नेछ । नयाँ काममा प्रयास अनुसारको गति प्राप्त हुनेछ भने पिताको सल्लाहमा गरीएको हर काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या भोगेकाहरुको स्वास्थ्य स्थिती सुधार भएर जानेछ ।
वृश्चिक राशीका ब्यक्तिका लागी यो साता प्रेम, विश्वास र आनन्दमय बनेर आएको छ । राम्रो कार्यको शुरुवात गर्नका लागी यो साता श्रेष्ठ समय मानिएको छ । लगन, मेहनत र सन्तुलीत व्यवहारबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुनेछ । इष्टमित्र तथा साथीभाइसंग घनिष्ठ सम्बन्ध हुनेछ । रोकिएका अधुरो काम बन्ने योग छ ।
कुम्भ राशीका ब्यक्तिका लागी यो साता संसाधनमा वृद्धिको संभावना भएर आउने छ । आफु भन्दा ठुलाबडाको आदर गरी उनिहरुको मार्गदर्शनमा काम थालेमा यस साता ठुलो योजनाले सफलता पाउने छन् । लाभमय समय रहेकोले आर्थिक लगानीले समेत फाइदा पुर्याउने छ । इण्डिया टुडेबाट
एजेन्सी । एकतर्फी प्रेमको कारण एक युवकले झण्डै ज्यान गुमाउनु परेको छ । फेसवुकमा भएको
एजेन्सी । कोरोना जोखिमका कारण विद्यालय बन्द हुँदा एक जोडी विद्यार्थीले गरेको अनौठो कृयाकलापले चर्चा
एजेन्सी । हरेक महिला आफ्नो पार्टनर आफुले सोचे जस्तो होस् आफुलाई माया गर्ने आफुलाई बुझ्ने
दोस्रो बच्चा जन्माउनु अघि बुझ्नु पर्ने ५ कुरा
अधिकाशं दम्पतीहरुमा पहिलो सन्तानको कति अन्तराल दोस्रो सन्तान जन्माउन भन्नेमा दोधार रहने गरेको छ ।
२ दिदीबहिनी एकाएक कसरी बने केटा ?
पाकिस्तानमा एक अनौठो घटना सार्वजनिक भएको छ । पाकिस्तानका दुई दिदीबहिनीले आफ्नो लिंग परिवर्तन गरी
यस्ता छन् कुकुरसम्बन्धि केही रोचक तथ्य
काठमाडौं – मान्छेको सबैभन्दा इमान्दार साथीका रुपमा कुकुरलाई लिने गरिन्छ । पाणी शास्त्री र मानववैज्ञानिक